Ọkachamara Semalt: Ihe niile ị tụrụ egwu ịjụ maka SEO
SEO nwere ihe anọ dị mkpa bụ ndị dị mkpa maka mmeri na mgbasa ozi n'ịntanetị na mgbasa ozi. Ihe ịga nke ọma n'ịntanetị dị mkpa n'inweta ndị ahịa ọhụrụ maka azụmahịa. Ihe anọ ahụ bụ ndepụta, ọbịa, mgbanwe, na ntinye nyocha. Ọ dị mkpa ka onye nwe ụlọ ahịa ghọta nkeji okwu dị mkpa. Ọ dịkwa mkpa iji hụ na search engine nwere ike ịchọta isiokwu ndị ahụ ma nyochaa ha n'ụzọ dị irè. Ebumnuche ndị ahụ kwesịrị ịdị ike, usoro usoro ọchụchọ ga-enwetakwa uru site na ebe nrụọrụ weebụ nke na-eme enyi - registration yahoo. Njikọ kwesịrị ịdị mfe ịmata ma dị mfe ịnyagharịa. N'akwụkwọ ahụ, Max Bell, Semalt Onye Ahịa Gbasara Ndị Na-ahụ Maka Ọrụ, kọwapụtara ihe anọ SEO .
Ebumnuche nke SEO bụ iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ nke azụmahịa ahụ nweta ọkwa dị elu na engines ọchụchọ. Ọnọdụ kacha elu na peeji nke mbụ na-eme ka nlele anya nke azụmahịa ahụ dị mma. Otú ọ dị, ogo ahụ abụghị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke usoro SEO. Ọtụtụ nchịkọta ọmụmụ ụlọ ahịa na-esi na usoro ọchụchọ. Ha na-enwe mmetụ ma ọ bụrụ na ha enwetaghị ọkwá kacha elu mgbe ha jiri ọtụtụ ego, mmadụ, na nkà na ụzụ. Ha kwesịrị ịghọta na ọkwa dị iche iche nwere mmetụta dị iche iche na ọganihu nke azụmahịa ahụ. Nkọwa ndị kachasị elu anaghị emetụta ahịa ahịa ozugbo; ha na-enye ohere maka ndị ọrụ ịntanetị ịmara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa ahụ na-enye. A weebụsaịtị nke a na-ahọrọ dịka №5 nwere ike ịnwe ọrụ dị mma na ozi karịa ụlọ ọrụ weebụ nke a na-ahọrọ №1..
2. Ndị ọbịa
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-aga na weebụsaịtị ga-abawanye ma ọ bụrụ na njikarịcha usoro na-emepụta ọkwa. Ebe nrụọrụ weebụ ga-edekwa ọkwa mgbe a na-eji usoro okwu dị mkpa na usoro SEO. Ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa dịka nsonaazụ nke ọkwa dị mma. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke usoro nyocha. Ndị ọkachamara SEO bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na a na-akwụghachi ya ma ọ bụ na ọ na-agbaso echiche na mgbasa ozi n'ịntanetị.
Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke usoro nyocha. Usoro SEO kwesiri igbanye uru karia nani ibido ogo choro na ahia ndi ozo. O kwesiri ime ka onu ogugu ndi mmadu gbasaa. Ihe mgbaru ọsọ ntọghata dị iche iche ma dabere na ọdịmma nke ndị nwe ụlọ ọrụ. Ihe atụ nke ihe mgbaru ọsọ ntọghata na-agụnye ihe dị elu nke blog, nbudata ngwa ngwaahịa, elu Twitter ma ọ bụ Facebook na-esote, ma ọ bụ ụba ahịa dị elu. Atụmatụ njikarịcha kwesịrị ijikọta na ihe mgbaru ọsọ ntụgharị ahụ.
4. Nchọpụta Nchọpụta na Mmetụta Nyocha
Ọ bụ ezie na engines ọchụchọ bụ nkà na ụzụ, ha enweghị ike ikpebi ihe onye nwe ụlọ ọrụ ahụ chọrọ. Nke a bụ ihe ịma aka siri ike nke usoro SEO n'ihi na a chọrọ ka ebumnobi ghota mkpa nke weebụsaịtị na isiokwu. Ya mere, SEO ọkachamara s, ya mere, choro igosi nsogbu ma ọ bụ echiche dị iche iche iji gbochie ịkọ nkọ site na engines ọchụchọ. Ebumnuche ahụ dị oke nkpa iji mee ka ndị ọbịa ahụ mara ihe ọmụma dị na ibe weebụ. Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịdị mfe ịnyagharịa, na ozi dịnụ kwesịrị ịdị na asụsụ dị mfe.